Voafehitra ny RPM an'ny bilaoginao, saingy tsy mandresy ny hazakazaka! | Martech Zone
Alakamisy, May 10, 2007 Asabotsy 25 Febroary 2017 Douglas Karr
Ankoatry ny fanampiana ezahako omena bilaogera hafa amin'ny alàlan'ity bilaogy ity dia tena manampy an-tanana bilaogera vitsivitsy aho. Mampalahelo fa tsy afaka mandany fotoana betsaka hanaovana an'izay tiako aho - tsy maintsy miasa aho handoavana ny faktiora. Omaly dia naka ny andro fialan-tsasatra aho ary nanatrika fivoriamben'ny tranonkala isam-paritra. Nahafinaritra ilay fihaonambe, andro iray feno fivoriana feno adiny 1 izay feno fampahalalana avy amin'ireo matihanina amin'ny tranonkala.
Feno hipoka ilay fotoam-pialana bilaogy ho an'ny vao manomboka! Rehefa nandritry ny herintaona mahery ianao no nibilaogy dia hadinonao fa maro ny olona tsy tratry ny blaogy na ny teknolojia ifotony. Ny iray amin'ireo fanontaniana tsara indrindra tamin'ny fivoriana dia ny: "Ahoana no ahafahako manavaka ny fahasamihafana misy eo amin'ny bilaogy sy tranonkala iray hafa." Tena tsy maintsy nieritreritra iray minitra aho, avy eo nanazava fa mety tsy ho hainao intsony ny milaza ny mahasamihafa azy. Tranonkala vaovao maro no mampiditra bilaogy ho toy ny fenitry ny fizarana atiny. Mazava ho azy fa ny tranonkala toa ahy dia 'mijery' toy ny bilaogy - miaraka amina fanangonana lahatsoratra an-gazety ao amin'ny pejy fandraisana amin'ny filaharana mifandimby… fa ny sasany kosa tsy manakaiky akory!
Iza no tokony mitoraka bilaogy?
Fanontaniana lehibe iray hafa koa ny fametrahana ny fomba ahafahan'ny bilaogy manampy amin'ny indostria tsy teknika na politika. Nirotsaka an-tsehatra tamin'ny fanaovana politika ny bilaogy noho ny fisafoahana sy vola be. Ny bilaogy dia nanam-bola tsara tamin'ny teknolojia foana satria, raha jerena, ny maha-bilaogera mahomby dia mitaky fahaizana avo lenta amin'ny haitao. Blogs afaka tanteraka manampy amin'ny indostria rehetra, na izany aza! Ny motera fitorahana bilaogy farany sy ny rafitra fitantanana atiny dia mandeha ho azy ny ankamaroan'ny safidy izay nanjary manual.
Ny namako, Glenn, dia nibilaogy nandritra ny fotoana nitoriany tany Mozambika. Gaga aho fa tsy nanaiky hitoraka bilaogy bebe kokoa ny fivavahana sy ny mpanao asa soa. Bilaogy Fred Wilson momba ny kapitalista Venture. Gaga aho amin'ireo indostria rehetra izay tsy manao bilaogy koa. Maninona ny mpahay siansa no tsy mitoraka bilaogy sy mizara ny zavatra hitany? Maninona ny bilaogera no tsy mitoraka bilaogy momba ny fisokafan'ny magazay, ny serivisy ho an'ny mpanjifa ary ny manokana? Fa maninona no tsy mitoraka bilaogy ny filoha? (Tsy misy mihaino ilay fandaharana amin'ny radio adaladala!) Maninona ny bilaogin'ny Polisy no tsy miresaka momba ny fahasamihafana misy eo amin'ny fiarahamonina? Maninona ny mpampianatra no tsy mitoraka bilaogy ary mizara ny androny hanampiana ny mpianatra sy ny ray aman-dreny? Tena mila izy ireo !!!
Convergence ny rafitra fitantanana bilaogy sy fitantanana atiny
Ohatra iray amin'ny tranonkala iray izay tsy mitovy amin'ny bilaogy ny hoe CNET. The faritra vaovao an'ny CNET tena bilaogy amin'ny lafiny rehetra amin'ny teny. Ny lahatsoratra dia milahatra araka ny filaharany ary ny lahatsoratra tsirairay dia manana permalink, mampiditra rohy, fanehoan-kevitra, ping, ary koa rohy sosialy fanoratam-boky. Fa tranokalam-baovao !?
Ny rafitra fitantanana atiny dia manatratra ny fanaovana bilaogy… na ny mifamadika amin'izany. Manaiky ny SEO tombony azo amin'ny fanaovana bilaogy ary nampiditra ireo fisongadinana ireo tamin'ny fampiharana azy. Saingy mbola tsy voavahan'izy ireo ny ankamaroan'ny olana, na izany aza! Omaly aho nanoratra momba ny fifantohana amin'ny herinao mba hahombiazana.
Tsy misy hafa amin'izany ny fitorahana bilaogy. Betsaka ny manararaotra ny teknolojia ary betsaka ny mampiasa ny atiny. Betsaka ny olona manoratra bilaogy mahafinaritra miaraka amin'ny atiny tsy mampino saingy tsy mitombo ny tranokalan'izy ireo… tsy satria bilaogy ratsy izany, fa satria tsy mahatakatra sy manararaotra ny teknolojia ilay bilaogera hisarika ny mpamaky vaovao.
Coaching amin'ny bilaogy
Noho ny te hahafanta-javatra, dia nandefa google aho Coaching amin'ny bilaogy. Tsy hanome anarana anarana aho, fa nanadihady momba ny am-polony amin'ireo tranokalan'ireo orinasa na olona ireo izay nanasokajy ny tenany ho 'Mpanazatra Blog'. Tsy nisy na iray aza tamin'izy ireo niresaka momba ny teknolojia tena izy! Tamin'ny fandinihana ireo pitsopitsony, ny ankamaroan'ny “Mpanazatra bilaogy” dia mpanoratra an-tsoratra sy mpahay tetikady tsotra fotsiny. Tsy isalasalana fa ireo dia singa tena ilaina amin'ny marika orinasa, fa geesh.
Heveriko fa toy ny fifaninanana hazakazaka amina fiara io ary tsy miova famindra mihitsy. Mamelombelona haingana araka izay tratra azy ny moteranao, fa ny olon-drehetra manidina eo akaikinao ary tsy azonao ny antony! Tena mila mpanazatra ianao izay mahatakatra ny fomba fiasan'ny fiara iray manontolo raha te handresy amin'ny hazakazaka ianao fa tsy ny fomba fitondrana fiara fotsiny. Mila olona izay hanery ny farany hafainganam-pandeha farany sy ny hery avy amin'ny bilaogy SY ny rindrambaiko fitorahana bilaogy ianao. Ny fahombiazako tamin'ny fitorahana bilaogy dia tena fitambaran'izy roa. Tsapako fa indraindray tsy dia mahay manoratra aho, saingy manonitra izany amin'ny alàlan'ny famafana ny onjam-tsoavaly soavaly ivelan'ny motera.
Tags: mpanazatra bilaogympanazatra bilaogyCMSrafitra fitantanana atinyfred wilson
May 10, 2007 ao amin'ny 10: 33 PM
Lahatsoratra mahafinaritra Doug.
Fihaonambe web inona no natrehinao? Manatrika iray amin'ity faran'ny herinandro ity any Chicago aho.
Manantena aho fa hahazo be dia be amin'izany toa anao amin'ny kaonferansao.
Ho eo ny olona avy amin'ny MyBlogLog, VideoSticky ary BlogTalkRadio hitonona anarana vitsivitsy. Tokony ho be fampahalalana izany.
Azoko antoka ny hizara izay ianarako mandritra ny faran'ny herinandro aminao sy ny mpamakinao.
May 11, 2007 amin'ny 1: 07 AM
Miara-miasa amin'ny fikambanana tsy miankina vitsivitsy aho hanampiana azy ireo hanangana bilaogy. Nandoa olon-kafa izy ireo teo aloha mba hanao fanovana html amin'ny tranokalany noho ny zavatra tena fototra satria matahotra ny hanakorontana ny kaody…
Vantany vao nasehoko azy ireo fa afaka manamboatra ny taratasiny / bala amin'ny alàlan'ny bilaogy iray izy ireo, dia raiki-pitia tamin'izy ireo avy hatrany.
May 11, 2007 amin'ny 10: 10 AM
Izaho dia tao amin'ny fivoriana "mandroso" kely kokoa tamin'ny Alarobia, saingy mbola nankafiziko ny fotoana sy ny resaka. Misaotra nandany fotoana.
Izaho dia nibilaogy manokana nandritra ny telo taona sy sasany teo ho eo (heveriko fa ny ray aman-dreniko no mpamaky lehibe indrindra amiko!), Ary mpanohana lehibe amin'ny fampiasana bilaogy matihanina aho. Miasa amin'ny asa tsy mitady tombony tsy manam-paharoa, na izany aza, mila manitsy hatrany ny toro-hevitra momba ny "varotra" sy "mpanjifa" aho mba hifanaraka amin'ny iraka ampanaovinay ireo mpamorona sy hanaiky ireo mpamokatra sarimihetsika. Tsy nahazo nanontany aho, fa te hahafantatra ny eritreritrao momba ny fomba ahafahan'ny transperancy fanaovana bilaogy manompo orinasa tsy mitady tombombarotra mifanohitra amin'ny orinasa iray.
Misaotra indray fa anisan'ny fihaonambe!
May 11, 2007 amin'ny 10: 37 AM
Tiako ny tany amin'ny kaonferansa. Vondron'olona marobe izaitsizy tokoa, samy nahazo hery sy nandray anjara ny rehetra. Tsy azoko natao ny nampientanentana ny tenako (Angamba ilay Venti Mocha efa nananako teo aloha!).
Vondrona mahatalanjona ny tsy mitady tombony. Nihaona tamina mpivady iray teto an-toerana aho ary niresaka bebe kokoa momba ny tambajotra sosialy. Heveriko fa misy fotoana roa mety:
1. Mizara vaovao eo anelanelan'ny tsy mitady tombony. Tsy dia mahita fifaninanana be eo amin'izy ireo aho, mahagaga ny fiezahan'izy ireo hiara-hiasa! Ny fametrahana fampahalalana ao anaty bilaogy iray hampivondronana ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana dia mety ho fomba iray hizarana torohevitra sy info ary hanampiana ireo faritra tsy mitady tombony amin'ny ankapobeny.
2. Mizara fampahalalana amin'ireo mpandray anjara sy mpanjifanao. Ny fiantsoana orinasa 'Non-Profit' fotsiny dia mahatonga ahy hieritreritra teti-bola hikorontana sy fanamby tsy mampino. Eo an-toerana, fantatro fa tsy tombom-barotra ny Indianapolis Symphony ary afaka manitatra loharano toa ny orinasan'olona izy ireo. Heveriko fa ilaina ny mampita izany amin'ireo mpandray anjara! Mieritreritra aho fa ho vonona ny hizara ny fahafantarana ny fomba fampiasana ireo vola ireo ny olona. (Ary koa ny fampiroboroboana ny hetsika eo an-toerana, sns.)
Nanana kafe aho omaly alina niaraka tamin'ny olona The Indianapolis Cultural Trail ary niresaka momba ny fomba nandehanan'ny atsimo atsinanana tanteraka ny fandrakofana ny zavakanto sy ny fialamboly ao amin'ny Star. Mila làlana mora vidy izy ireo mba hamoahana ny teny ary Blog iray no fomba mety indrindra anaovana izany!
Te-hihaona amin'ny kafe aho ary hiresaka ny fomba hanampiako anao!
May 11, 2007 ao amin'ny 1: 29 PM
Ny sasany amin'ireny 'Blog Coach' ireny dia mampatsiahy ahy ireo mpivarotra menaka bibilava taloha. Mitandrema!
May 11, 2007 ao amin'ny 7: 15 PM
Eny - iray amin'ireo zavatra hitako fa mahaliana dia ny vitsy amin'ireo 'mpanazatra' ao amin'ny bilaogy no manana bilaogy. Raha tsy mitoraka bilaogy amin'ny tenanao ianao, ahoana no hataonao haharaka ny teknolojia sy ny fanovana ny 'tontolon'ny bilaogy'?
Hoatran'ny manakarama consultant SEO tsy manana tranokala io. Tena hafahafa tokoa!